ဆောင်းပါး | Myawady Webportal
နိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ယူမှု ကိုးလမြောက်၏ မှတ်တိုင်များ
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ သမိုင်းဝင်တော်လှန်ရေးပန်းခြံ၌ ပန်းခြံအတွင်း အများပြည်သူတို့ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရေးနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားပြုလုပ်နိုင်ရေး ပြင်ဆင်ထားရှိမ
Read more about နိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ယူမှု ကိုးလမြောက်၏ မှတ်တိုင်များ
ဆောင်းဦးကာလ အရှေ့မိုးကုတ်စက် ဝိုင်းထက်ဝယ် ရောင်နီတို့ထွန်းစပြုလာသည်။ အရုဏ်ဦးသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ပြီး မျှော်လင့်ချက်အသစ်တို့ဖြင့် တစ်လက်လက် တောက်ပလျက်ရှိသည်။ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ရောင်နီဦးကား စစ်မှန်ပြီးစည်းကမ်း ပြည့်ဝ သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ပါဝင်နိုင်သော ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ မည်မျှမှောင်မိုက်သည့် လမိုက်ညပင်ဖြစ်လိမ့်ဦးတော့ ရောင်နီဖြာလျှင် လင်းရပေမည်။
(၂၀၂၁) ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းညီလာခံဂုဏ်ပြုဆောင်းပါး
Read more about တစ်ခါစစ်သားထာဝရစစ်သား မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးများ
အမှောင်ပယ်ရှင်း အလင်းရောက်ပြီ မြန်မာပြည်
Read more about အမှောင်ပယ်ရှင်း အလင်းရောက်ပြီ မြန်မာပြည်
ကျွန်တော်သည် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်းတွင် မွေးဖွားသန့်စင် လူဖြစ်လာခဲ့ရသူမို့ တန်ဆောင်မုန်းလသည် ကျွန်တော့်အတွက် တန်ဖိုးရှိလှသည်မှာမှန်၏။
ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေး ဘဝမှစ၍ နှစ်စဉ်မိဘများက မွေးနေ့အမှတ်တရလေး ကျင်းပပေးသည်။
မိသားစုစားစရာ မုန့်ပဲသရေစာလေး တစ်မျိုးမျိုး အိမ်မှာ စီစဉ်သည်။
Read more about အမျိုးသား စိတ်ဓာတ်နှင့်မြို့မ
NUG အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ “ Hit List ”ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?
Read more about NUG အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ “ Hit List ”ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?
Read more about ပြည်သူများနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစာရင်းသွင်းခြင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံလာခြင်းနှင့်အတူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ထိုးနှံပြီးစီးမှုအား မှတ်တမ်း တင်ခြင်း၊ ထိုးနှံပြီးစီးကြောင်း အထောက်အထားများ ထုတ်ပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးလာပါသည်။ ထိုသို့စာရင်း ဇယား များရေးသွင်းခြင်းကို လူလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရ ခြင်းကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများစွာဖြစ်စေပါသည်။
Read more about ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစာရင်းသွင်းခြင်း
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို လျှော့ချဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေ အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချခြင်းပါပဲ။ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတွေကို အများဆုံး အသုံးပြုကြတာက စက်မှုဇုန်တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဆီကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ကလည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
Read more about ပင်လယ်နီထဲမှာရှိနေမယ့် အဋ္ဌဂံစက်မှုဇုန်မြို့
လေထုထဲက ကာဗွန်တန်ချိန် ၁ဝဝဝ ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် မိုးမျှော်တိုက်များ
ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုကတော့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုပါပဲ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် တတ်သိပညာရှင်တွေက အမျိုးမျိုး ကြံစည်တွေးတော အကောင်အထည်ဖော် လာကြပေမယ့် လက်တွေ့ အခြေအနေမှာတော့ အမှန်တကယ် အလုပ်ဖြစ်တာ နည်းပါတယ်။
Read more about လေထုထဲက ကာဗွန်တန်ချိန် ၁ဝဝဝ ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် မိုးမျှော်တိုက်များ